नारायणी अस्पतालमा ९० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४५ जनामा कोरोना पुष्टि « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७८, ५ बैशाख आईतवार १५:४६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, वीरगञ्ज । पछिल्लो समय बारा र पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नारायणी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परिक्षणमा पर्साका ३९ र बाराका ६ गरी थप ४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा ९० जनाको पीसीआर परिक्षण गर्दा थप ४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सरोजरोशन दासले जानकारी दिनुभयो । परिक्षण गरिएका मध्ये १९ महिला र २६ पुरुषको रिर्पोट पोजिटिभ आएको छ । संक्रमित पुष्टि हुनेहरुमा पर्सा जिल्लाको बीरगञ्ज महानगरपालिकामा ३८ जना र पर्सागढी नगरपालिकामा १ जना गरि ३९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
उता बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा २, फेटा गाउपालिकामा १ , परवानीपुर गाउपालिकामा १, त्यैगरी कलैया उपमहानगरपालिकामा १ र करैयामाई गाउपालिकामा १ गरी ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको डा. दासले बताउनुभयो । संक्रमितहरुको सिटी भ्यालू १४.६ देखि ३५ सम्म रहेको छ । हाल १४ जना कोरोना संक्रमित नारायणी अस्पतालको आईसोलेसन वार्डमा उपचाररत रहेका छन् । पछिल्लो समय बिरगंजमा परिक्षणको आधा जतिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुदै आएको छ ।